Waqolwa uR20 940 uMaShelembe: abameli
Boniswa Mohale | October 9, 2021
SEKUVELE ukuthi uNksz Makhosi Shelembe (MaShelembe) waqolwa uR20 940, ngowesifazane owayemenzele i-baby shower eRichards Bay, ngoSepthemba 25.
Lezi zindaba ziqukethwe encwadini yabameli bakaMaShelembe abayithumelele uNksz Nomfundo Mathonsi.
Abameli bakaMaShelembe okuyiRajaram Mvulane Attorneys, bathe uNksz Mathonsi wavakashela uMaShelembe kubo, wamcela i-akhawunti yasebhange waze wahamba naye ukuyoqinisekisa ukuthi le akhawunti iyasebenza.
Emuva kwalokho, wayalela abantu ukuthi banikelele uMaShelembe babhale namagama abo ukuveza ukuthi imali iqhamuka kephi.
Abameli baveza ukuthi ngoSepthemba 17, uNksz Mathonsi walanda uMaShelembe ukuba amvakashele kwakhe, wabe esemazisa ukuthi kunomcimbi wokukhunga ingane ohlelwe yiLadies House.
NgoSepthemba 23, uNksz Mathonsi no-Andy Brown bashayela ucingo uMaShelembe bemtshela ukuthi imali efakwe kwi-akhawunti yakhe iyokwenza lo mcimbi, bamphoqa ukuthi afake uR5 000 kwi-akhawunti ka-Andy Brown, nangempela wenza njengoba etsheliwe.
Kuthe ngoSepthemba 25 esefika eRichards Bay emcimbini, waphoqwa ukuthi akhokhe uR7 240 wendawo okwakwenzelwe kuwo lo mcimbi.
Wabuye waphoqwa ukuthi akhokhe izindleko zendawo yokulala, Indaba Guest House, akhokhele noNksz Mathonsi nengane yakubo.
Akugcinanga lapho njengoba incwadi yabameli iveza ukuthi uNksz Mathonsi wantshontsha imali kwi-akhawunti kaMaShelembe. NgoSepthemba 16. Kuthiwa wantshontsha uR3 000, wabuye wantshontsha omunye uR3 000 ngoSepthemba 18, wagcina ngokuntshontsha uR2 700 ngoSepthemba 20.
Isiyonke imali abameli abafuna ayikhokhe iwuR20 940.
UNksz Mathonsi uyalelelwe ukuba akhokhe le mali kungakapheli izinsuku ezintathu, abuye abhale isixoliso esibheke kuMaShelembe, esinye esibheke emndenini kaMaShelembe nesinye esibheke kubantu baseNingizimu Afrika abanikelela uMaShelembe.
Kuthiwe izindleko zencwadi athunyelelwe yona nguyena ozozikhokha futhi uzobhekana nazo zonke izindleko zezinyathelo zomthetho azothathelwa zona.
Uyalelwe ukuthi imali ayifake kwi-akhawunti kaMaShelembe noma esikhwameni sabameli, iRajaram Mvulane Attorneys.
Udonswe ngendlebe ukuba angalokothi akhulume noMaShelembe noma amalungu omndeni wakhe.
Ethintwa yiSolezwe, uNksz Mathonsi, ukuqinisekisile ukuthi uyitholile incwadi yabameli kodwa wathi akazi lutho ngezinsolo ezibhekiswe kuye.
“Ngibatshelile abameli ukuthi abaqhubeke, sizobonana enkantolo,” kusho uNksz Mathonsi.